माइतीघर सडकको चिसो भुईमा पलेटी कसेर फेरि किन बसे प्रचण्ड र माधव नेपाल ? Nepalpatra माइतीघर सडकको चिसो भुईमा पलेटी कसेर फेरि किन बसे प्रचण्ड र माधव नेपाल ?
माइतीघर सडकको चिसो भुईमा पलेटी कसेर थचक्क फेरि किन बसे प्रचण्ड र माधव नेपाल ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल लगायतका नेताहरु काठमाडौँको माइतीघर सडकको चिसो भुईमा पलेटी कसेर फेरि बसेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको विरोधमा आन्दोलनरत नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूहले माइतीघर मण्डला धर्ना दिन प्रचण्ड र नेपाल आज आइतबार सहभागी भएका हुन् ।
अध्यक्षद्वय नेपाल लगायतका नेताहरु पलेटी कसेर सडकमा धर्नामा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू सहित राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र दुवै संविधानसभाका सदस्यहरू सहभागी छन् । सो पार्टीका संघीय र प्रदेश सांसदहरु माघ १४ देखि माइतीघर मण्डलामा दैनिक धर्ना दिँदै आएका छन् ।
सो समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध २८ गतेको काठमाडौंका वृहत शक्ति प्रदर्शनअघि प्रचण्ड-माधव समूहले तेस्रो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत धर्ना दिँदै आएको हो । नियमित धर्नामा रहेका संघीय तथा प्रदेश सांसदहरुलाई साथ दिन आइतबार अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपाल सहभागी भएको सो समूहका एक नेताले बताएका छन् ।
२०७७ पुष १० गते शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा आयोजित प्रदर्शनमा ‘हामी यहाँ छौं’ लेखिएका प्लेकार्ड शरीरमा लगाएर प्रचण्ड र माधव नेपालसँगसँगै बसेका थिए भने उनीहरुको पछाडि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ बसेका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माधव नेपाल सडकमा ओर्लिएको दृश्य हेरेर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा-परिचर्चा व्यापक भएको थियो । कसैले उनीहरुमाथि व्यंग्य गरेका थिए भने कसैले उनीहरुको आन्दोलनको समर्थन गरेका थिए ।
सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘नारायणहिटीमा आमसभा गरेर ओलीले २३ गते हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न सक्छन्’
ओली समूहको नेकपाले माघ २३ गते नारायणहिटी सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने
#पलेटी कसेर थचक्क